6-dayada ugufiican (* 6 *) Beddelashada Bayaanka Suuqgeeyayaasha ⋆ Wararka: Farshaxanka, Safarka, Naqshadeynta, Teknolojiyada
6-dayada ugufiican (* 6 *) Beddelashada Bayaanka Suuqgeeyayaasha Shirkadaha
Marka la qeexo, xayeysiinta ku xiran waa qorshe tixraac ah oo iibiye internet ah (xayeysiiyaha) uu ku siiyo magdhow marka ay dadku ka iibsadaan badeecadooda wax ka gudbintaada internet hyperlink.
Si ka duwan noocyo badan oo kala duwan oo xayeysiis ah oo ugu horreyn ku bixiya iyada oo ku saleysan qasabno ama aragti, shirkado gacansaar la leh shirkado CPA ah (qiime-ku-helitaan), ama CPL (kharash -kiiba-hoggaan) aasaas. Si fudud haddii loo dhigo, waxaad kasbataa kharash markii qofku shaqsi sameeyo (yacni inuu helo alaabta ama saxeexo jeeg lacag la'aan ah).
Maaddaama ay jirto khatar aad u yar oo xagga suuq-geynta ah, codsiyada ku xiran waxay bixiyaan culeysyo koror ah oo loogu talagalay qorayaasha marka la barbardhigo Google AdSense ama noocyo kala duwan oo xayeysiis ah.
Xayeysiinta gacansaarka ahi waxay rabtaa hab farsamo gacmeed oo badan. Waa inaad daahfurtaa badeecad iyo shirkado aad qiyaasi karto inay si dhab ah ugu habboon yihiin macaamiishaada. Intaa ka dib waa inaad si xeeladeysan ugu darto qoraaladaada mareegaha oo lagu daro meelo badan oo kala duwan oo ka mid ah websaydhkaaga, sidaa darteed macaamiisha ayaa iibsan kara badeecada iyaga oo adeegsanaya talobixintaada internet hyperlink.
Kaliya sidee u shaqeeyaa Suuqgeynta / Raadinta Raadinta?
Marka hore, waa inaad kashifataa hay'ad ama badeecad aad rabto inaad kobciso oo keliya. Waa inaad doorataa shirkado ama shey aad qiyaasi karto inay hubaal ahaan la xiriiri doonaan mawduuca websaydhkaaga marka lagu daro waxtarka suuqa yoolkaaga. Badeecada ama shirkadda aad dooratay waxay u badan tahay in loo yaqaan 'Iibiyaha'.
Marka xigta, waa inaad lashaqeysaa hay'adda adoo xubin ka noqonaya barnaamijkooda wadaagga ah. Tani waxay kaa dhigeysaa iyaga 'Associate'. Shirkadaha qaar ayaa waliba adeegsada weedho wehel, saaxiibbo, iyo kuwa kale oo badan
. Markaad runtii ku biirto barnaamijkooda wehel (oo intaa dheer loo yaqaan Associate Program), waxaad heli doontaa aqoonsi cusub oo xiriir la leh. Xaqiiqdii waxaad ubaahan doontaa inaad ka faa'iideysato inta badan ID-gaan ku xiran dhammaan xiriiriyeyaasha xiriiriyeyaasha ah ee aad ku dareyso boggaaga si aad u dhiirrigeliso sheyga.
Waad ku dhiirrigelin kartaa badeecada adoo ku daraya markhaatiyaal wax soo saar oo dhammaystiran, kugula talin kara qoraaladaada, soo bandhig xayaysiisyada banner, dirista e-maylka e-mailka, iyo sidoo kale dheeraad ah Dhammaan booqdayaasha aad u rarto bogga iibiyaha oo ay weheliyaan aqoonsi gaar ah ayaa laga yaabaa in lala socdo.
Sida ugu dhakhsaha badan ee macaamilku u iibsado, waxaad hubaal ka dhigi doontaa magdhow. Magdhowgaaga waxaa laguu siiyaa sida ugu dhakhsaha badan ee dakhligaaga u gaaro gaar ahaan xaddidan 45-60 maalmood.
Kaliya Sida Loogu Bilaabo Xayeysiinta Shirkadaha
Marka hore, waxaad ubaahantahay inaad xasuusato inaad isticmaaleyso nidaamka ugu sareeya ee nidaamka blogka, marka lagu daro waxaa laguu oggol yahay inaad socodsiiso dadaallada xayeysiinta ah ee shabakadaada.
Mararka qaar, haddii aad isticmaasho WordPress.com, intaa ka dib waxaa jira xaddidaadyo la xiriira sheyga ama shirkadaha aad awoodi doontid inaad la xiriiraan. Wixii faahfaahin dheeraad ah ka eeg isbarbardhigga WordPress.com vs WordPress.org.
Dhinaca ka soo horjeedka ah haddii aad ku jirto bogga internetka ee WordPress.org, ka dib waxaad awoodi doontaa inaad ku darto nooc kasta oo xiriir la leh internetka oo aad rabto marka lagu daro inaad si wax ku ool ah ula macaamisho dadaalladaada ku xiran.
Haddii aadan horumarinin goob internet xilligan, intaas ka dib waxaad toos u bilaabi kartaa isla markiiba. Si fudud ula jaanqaad tilmaamayaasha muuqaalkayaga faahfaahsan ee ku saabsan talooyin ku saabsan sida loo bilaabo weblog, sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad kor u kacdo oo aad ku shaqeyso wax ka yar soddon daqiiqo.
Marka xigta, waxaad dooneysaa inaad u oggolaato macaamiishaada inay si sax ah u ogaadaan habka aad dakhliga uga soo saarto bartaada websaydhkaaga oo ay ka mid yihiin muujinta bogga internetka. Eeg WPBeginner's shaacinta bogga intarnetka marka lagu daro ku faraxsanaanta ka faa'iideysiga mowduuc ahaan.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ku soo dhoweyso qorshe gaar ahaaneed iyo sidoo kale weedho adeeg ah bogga internetka ee websaydhkaaga.
Kuwani waxay ka mid yihiin baahida loo qabo in la helo bogag internet oo loogu talagalay degel kasta oo WordPress ah. Kaliya kama hortagayaan qodobbada sharciga ah goor dhow ama ka dib, si kastaba ha noqotee waxay sidoo kale kaa caawinayaan inaad ururiso sanduuqa aaminaadda iyo daawadayaashaada.
article PreviousTartanka Hobie TOC (KAYAK kalluumeysi 30k !!) Knoxville
Next articleBandowga California; CDC waxay niyad jabisaa safarka; Khadadka tijaabada
*** ANTI-PIRACY WARNING *** This content material is copyright to Fish & Fishing. Any unauthorized copy, redistribution or re-uploading in any media is strictly prohibited...